Akụkọ - Gini ka SELV putara maka inye ikike?
Ogologo usoro PFC + UL + FCC 90-305VAC
EC EMC Series Ikanam ọkwọ Aluminium Case 12V / 24V
UL Series LED Driver Aluminom Ileba 12V / 24V
AC100-240 TO DC 12 / 24V IP67 Aluminium Case Series
EMC Plastic Case 200-240VAC ka 12V / 24V Ike Tụkwasịnụ
100-240VAC UL + EMC Plastic Case Ike Tụkwasịnụ
N'èzí Waterproof ikanam ọkwọ ụgbọala
Ime ụlọ Ikanam ọkwọ
Ozi si n’aka Onye-isi ala
Akwụkwọ nke Honor
Kedu ihe SELV pụtara maka inye ike?
SELV na-anọchite anya nchekwa nchekwa ọkụ ọzọ. Fọdụ akwụkwọ ntuziaka ike-AC-DC na-ebu ịdọ aka na ntị gbasara SELV. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịdọ aka na ntị banyere ijikọ mmepụta abụọ n'usoro n'ihi na volta ọkụ na-ebute elu nwere ike karịa ọkwa nchekwa SELV akọwapụtara, nke na-erughị ma ọ bụ hà 60VDC. Tụkwasị na nke a, enwere ike ịdọ aka na ntị banyere ichebe ọdụ ndị na - emepụta ihe na ndị ọzọ nwere ike ịnweta na ike ọkọnọ na mkpuchi iji gbochie ndị ọrụ na-arụ ọrụ metụrụ ha aka ma ọ bụ ihe ọghọm jiri ngwa ngwa belata, wdg.
UL 60950-1 na-ekwu na sekit SELV bụ "sekit nke abụọ nke etubere ma chebe ya na n'okpuru nsogbu ọ bụla na otu nsogbu, oke ya anaghị agabiga uru dị mma." A "sekit nke abụọ" enweghị njikọ ọ bụla na ike bụ isi (AC mains) ma na-enweta ike ya site na onye ntụgharị, onye ntụgharị ma ọ bụ ngwaọrụ iche.
Imirikiti ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ AC-DC dị ntakịrị na-arụpụta na 48VDC na-egbo mkpa SELV. Site na mmepụta 48V ntọala OVP nwere ike ịbụ 120% nke aha, nke ga-ekwe ka mbido ahụ ruo 57.6V tupu ike ọkụ akwụsị; nke a ka ga-ekwekọ na 60VDC kachasị maka ike SELV.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-enweta ihe nrụpụta SELV site na mwepu eletriki ya na mkpuchi abụọ ma ọ bụ nke siri ike n'etiti isi na nke abụọ nke ndị na-agbanwe ọkụ. Ọzọkwa, iji zute nkọwa nke SELV, voltaji dị n'etiti akụkụ abụọ / ndị nduzi ọ bụla nwere ike ịnweta ma ọ bụ n'etiti otu akụkụ nwere ike ịnweta / onye na-eduzi ya na ụwa agabigaghị uru dị mma, nke akọwapụtara dị ka elu 42.4 VAC ma ọ bụ 60VDC maka karịa 200 ms n'oge nkịtị ọrụ. N'okpuru otu mmejọ ọnọdụ, a na-ahapụ ikike ndị a ka ha gaa elu na 71VAC elu ma ọ bụ 120VDC karịa 20 ms.
Ya ejula gi anya ma oburu n’ichota udiri eletriki ndi ozo nke na akowa SELV n’iru. Nkọwapụta / nkọwa ndị a dị n'elu na-ezo aka na SELV dịka UL 60950-1 kọwara ya na nkọwapụta ndị ọzọ metụtara ya gbasara obere ike ọkọnọ.
Post oge: Jul-20-2021
Maka Ajụjụ Ngwaahịa
Adreesị:No.37 Zhengxiang 2nd Street, Tanzhou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China (nkwụsị nke Zhuhai na Zhongshan)